भिण्डी खाँदा अनेक फाइदा : मुटु रोगको जोखिम कम हुनेदेखि अनुहारको चाउरीपना हटाउनेसम्म - संदेश पत्र
आज: २०७७ आश्विन १५, बिहिबार
विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही
१0 घण्टा अघि
नक्कली इन्स्पेक्टर पक्राउ
८ दिनपछि सम्झनाको दाहसंस्कार
टिभी कलाकार गुरजित चौधरी र देबीना बनर्जीलाई कोरोना संक्रमण
कोरोनाबाट संक्रमणबाट थप ५ जनाको मृत्यु
आज कति छ सुनको मूल्य ?
मङ्गलबारदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागु हुने
आईपीएलमा आज मुम्बई र बैंगलोर भिड्दै
भिरबाट लडेर युवकको मृत्यु
१विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही
२नक्कली इन्स्पेक्टर पक्राउ
३८ दिनपछि सम्झनाको दाहसंस्कार
४टिभी कलाकार गुरजित चौधरी र देबीना बनर्जीलाई कोरोना संक्रमण
५कोरोनाबाट संक्रमणबाट थप ५ जनाको मृत्यु
६फेरि घट्यो सुनको भाउ : तोलाको कति हेर्नुहोस् ।
७आज कति छ सुनको मूल्य ?
८मङ्गलबारदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागु हुने
सुसाइड गरेका सुशान्तको कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो
४५४ पटक पढिएको
भिण्डी खाँदा अनेक फाइदा : मुटु रोगको जोखिम कम हुनेदेखि अनुहारको चाउरीपना हटाउनेसम्म
२०७७ भाद्र २२, सोमबार (३ हफ्ता अघि)
काठमाडौं । हरियो साग शब्जिमा भिण्डीको एउटा बेग्लै स्थान छ। नेपाल लगायत विश्वका अन्य देशहरुमा पनि मानिसद्वारा भिण्डीको परिकारलाई अत्याधिक मन पराइन्छ। तर, कतिपय व्यक्तिले भिण्डीमा हुने चिप्लोपनाका कारण खान आनाकानी गर्ने गर्दछन्। भिण्डीमा शरीरका लागि लाभदायक हुने विभिन्न खनिज तत्वहरु पाइने गर्दछ।
यसमा पाइने गुणकारी तत्वहरुले शरीरको अनावश्यक तौल घटाउनदेखि लिएर मुहारमा चमक तथा चाउरीपना कम गर्न मद्दत गर्दछ। भिण्डीका फाइदाहरु भिण्डीमा पाइने पेक्टिनका कारण यसले शरीरको कोलेस्ट्रोललाई घटाउन मद्दत गर्दछ।
साथै यसमा पाइने सोल्युबल फाइबरले रगतमा कोलेस्ट्ट्रोललाई नियन्त्रण गरि मुटु रोगको जोखिम कम गर्दछ। भिण्डीमा प्रशस्तमात्रामा पाइने यूजेनोल मधुमेहका विरामीका लागि फाइदाजनक हुनेगर्दछ। यूजेनोलले शरीरमा सुगरको मात्रा नियन्त्रण गरी, मधुमेह हुने जोखिम कम गर्दछ।
एनिमियाका बिरामीहरुका लागि पनि भिण्डी निकै प्रभावकरी शब्जी हो। भिण्डीमा पाइने आइरनले हेमोग्लोविनको निर्माण गर्न मदत पुर्याउँदछ र भिटामिन के ले रक्तश्राव रोक्ने कार्य गर्दछ।
भिण्डीमा भरपुर मात्रामा सोल्युबल फाइबर पाइन्छ जुन पाचन प्रणालीका लागि अत्यन्तै प्रभ्कारी हुन्छ। यसले पेट फुल्ने, कब्जियत र ग्यास जस्तो समस्याहरु हुन दिँदैन। साथै हड्डी बलियो बनाउनका लागि पनि भिण्डी फाइदाजनक शब्जी हो।
भिण्डीमा भिटामिन सी सँगै एन्टिअक्सिडेन्ट प्रचुर मात्रामा पाइने हुँदा यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुधारगर्नुका साथै विभिन्न संक्रामक रोगहरुसँग लड्न मद्दत गर्दछ। यसको सेवनले चिसोलाग्ने समस्या पनि कम हुन्छ।
बिर्सेर पनि तामाको भाँडामा नखानुहोस् यी खानेकुरा
विवाहपछि चम्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य
खाली पेटमा मह मिसाएर दैनिक एक पोटी लसुन खानुहोस्, हुनेछन् यी १० फाइदा
के पेट बढिरहेको छ ? यसरी घटाउनुहोस !